Barnaamijka kaalmada ayaa isbaddelaya
Isbeddello ku-meel-gaar ah oo ku yimid barnaamijyada kaalmada dadwaynaha muddada xaaladda degdegga ah ee caafimaadka
Ujeedooyinka guud iyo xeerarka qaarkood ayaa laga beddelay barnaamijyada kaalmada dadwaynaha si:
Ay ugu suurtageliso dadku inay badbaado ku joogaan oo aysan faafin fayraska COVID-19
Loo hubiyo inay dadka inta ugu badan ee suurtagalka ahi helaan caawimaada ay u baahan yihiin muddada xaaladdan degdegga ah lugu jiro.
Kaalmada xannaanada ilmaha
Isla markaaba ma waayi doontid kaalmada xannaanada ilmaha haddii aadan tagi karin shaqada ama dugsiga.
Haddii bixiyaha xannaanada ilmahaagu u xiran yahay, kaalmada xanaanada ilmaha ayaa siin doonta lacagta bixiyaha illaa muddo hal bil ah.
Haddii ilmahaagu aanu aadin xannaano carruur muddadan, wac shaqaalaha xannaada ilmaha ee degaankaaga (county) ama Hindi qabiileed (tribal) si aad uga hesho dhaafitaan xadka maalmaha maqnaanshaha.
Haddii aadan bixin karin la-bixintaada (co-pay), waxa ku furan siyaabo kale oo aad u fulin karto waxa lagaaga baahan yahay xagga copayga.
Shuruudihii wargelinta dawlada ee xagaaga waxba iskama bedelin ee waa inaad nala socodsiisaa wixii isbedela.
Kaalmada lacagta kaashka ah
Barnaamijyada Kaalmada lacagta kaashka ah waxa ka mid ah GA (Kaalmada Guud), MFIP (Barnaamijka Maalgashiga Qoyska Minnesota), DWP (Barnaamijka U Weecinta Shaqada), MSA (Kaalmada Kaabka ah ee Minnesota), Housing Supports (Taageerada Guriyeynta), iyo Refugee Cash Assistance (Kaalmada Lacagta Kaashka ee Qaxootiga).
Inta mudada xaalada emergencyga ee COVID-19 lagu jiro qasab ma ah inaad ka soo warbixiso wixii isbeddello ah ama in aad soo buuxiso oo aad soo gudbiso Foomamka Ka Warbixinta Reerka (Household Report Forms). Laguguma soo dallaci doono biximaha dheeraad ka ah (overpayment) haddii aad ka gaabiso warbxinta yaala daruuriga ah.
Waxaad hase yeeshe aad ka soo warbixin doontaa isbeddellada aad ku helayso caawinaad lacageed oo laguu kordhiyo.
Adiga xilkeeda laguuma raaci doono wixii qaladaad ah ee ka yimaada xagga countyga (hay'adda maxalliga ah) ama Minnesota Department of Human Services (Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Minnesota) ama (qaladaad ku yimaada combuterada hawlgalka macaawimada lacagta (system errors).
Waxaad ka codsan kartaa caawimaad lacageed oo telefoon ahaan ah countyga (degmadaada) ama tribal human services (hay'adda adeegyada aadanaha ee qabiileed) ama hay'adaha la shaqeeya Refugee Cash Assistance (Kaalmada Lacagta Kaashka ee Qaxootiga).
Ma jiraan wax ganaaxyo shaqa geyn ah (sanctions) oo kaaga imanaya xagga MFIP (Barnaamijka Maalgashiga Qoyska Minnesota) muddada xaaladda degdegga ah ee COVID-19 lagu jiro.
Lacagta caawimaada ee MFIP (Barnaamijka Maalgashiga Qoyska Minnesota) lagaa joogin maayo haddii aad gaarto waqtiga xaddidka ee MFIP oo ah 60 bilood ilaa inta lagu jiro muddada xaaladda degdegga ah ee COVID-19.
Barnaamijka Taageerada Kaabka ee Nafaqada (SNAP)
Qofna ma waayi doono dheefahooda SNAP haddii aysan buuxin karin shuruudaha shaqada. Ma jiraan waqti xaddidyo loogu talagalay qof kasta oo qaata SNAP muddada xaaladda degdegga ah.
Haddii aad ku jirto duruuf ay khatar kugu tahay inaad gurigaaga ka baxdo, si aad u magacowdo wakiil idman , wac xafiiska degmadaada (county) ama xafiiska qabiileed (Native American tribal office) si qof saaxiib oo aad aamminto ama xubin ka mid ah qoyskaaga ay kuugu soo adeegi karaan oo kugu keenaan a dheefahaaga SNAP (SNAP benefits).
La xiriir waxbarasho bixiyaha SNAP oo aad ka heli doonto bartaa internetka University of Minnesota Extension..Si aad macluumaad dheeraad ah aad uga ogaato sidaad isku gaarsiin lahayd miisaaniyadaada cuntada si habab caafimaad leh.
Shaqada iyo Tababbaritaanka
Adeegyada shaqada iyo tababbaritaanka ayaa wali way kuu furan yiheen hadaad caawimaad ka heshid MFIP (Barnaamijka Maalgashiga Qoyska Minnesota), iyo SNAP Employment & Training (Shaqada iyo Tababbaritaanka SNAP).
Waxaad kula xiriiri kartaa la taliyahaaga Barnaamijka Maalgashiga Qoyska Minnesota telefoon ahaan ama iimayl.
Haddii aad qaadato caawimaad SNAP ka timi oo aad rabto caawimo raadin shaqo ama beddelasho shaqo, waxaa jira hay'ado kaa caawin kara – badanaa adiga oo aan guriga ka tagin. Si aad uga ugaato hay'ad agagaarahaaga ah, eeg Khariidadda Adeeg Bixiyaha Shaqada iyo Tababbaritaanka SNAP,, ama wac xafiiska deegaankaaga (county) ama xafiiska adeegyada aadanaha ee qabiileed (tribal).
Barnaamijka dib u dejinta
Waxa ka mid ah dadka ka hela caawimaad Barnaamijka dib u dejinta (Resettlement Program) dadka Qaxootiga ah, kuwa magangelyo doonayaasha, kuwa dhibbanayaasha tahriibka ah, kuwa Amerieeshiyaanka ah, kuwa Afqaani ama Ciraaqida ah ee haysta Fiisada Gaarka Ah, ama kuwa ah soogalayaasha Reer Kuuba ama Haiti.
Hay'ado gobolka Minnesota oo dhan ka soo jeedda ayaa kaa caawin kara inaad codsato gargaarka dowladda iyo caymiska shaqala'aanta, xallinta caqabadaha wax-barashada aan lays hor-fadhiyin (distance learning), ama sidaad u heli lahayd caawimaad cunto ama daryeel caafimaad iyo wax yaabo kale oo anfac ah.
Hal kan waxaad ka helaysaa magaacyada Hay'adaha Dib u dejinta ee Isku Xiran oo kaa caawin kara ama wac mid ka mid ah xarumaha deegaaneed ee hay'adahaas ee degmada ku nooshahay: 218-512-1500 (Waqooyiga Minnesota); 320-455-3001 (Bartamaha Minnesota markay tahay telefoonka); 507-289-5960- extension 119 (Koonfurta Minnesota telefoonka; 612-465-0596 (aagga magaalo waynta Twin Cities Metropolitan telefoonka).
Sida loo codsado dheefaha
Waxaad la xiriiri kartaa xafiiska degmadaada ee kuu dhow ama xafiiska adeegyada aadanaha ee Hindi qabiileed(tribal). Waad ku codsan kartaa SNAP (Barnaamijka Taageerada Kaabka ee Nafaqada) ee Nafaqada ama gargaarka lacagta telefoon ahaan.
Waxaad soo gudbin kartaa codsi elektiroonig ah adiga oo mara ApplyMN.
Hay’da HungerSolutions Minnesota waxay kugu xiri karta shaqaale haddii aad u baahantahay caawimo codsasho SNAP (Barnaamijka Taageerada Kaabka ee Nafaqada). Wac 1-888-711-1151 ama booqo hungersolutions.org.
Hay’da Bridge to Benefits ee ay sameysay Children’s Defense Fund ayaa iyaduna kaa caawin karta inaad ogaato n dheefaha gargaarka bulshada ee wax kuu tari kara.
Ma u baahan tahay caawimo kale?
Dowladda federaalku waxay u soo fidinaysaa qoysaska badankood lacag hal-mar ah. Haddaad xareysay canshuuraha 2018 ama 2019 ama aad hesho dheefaha sooshal sekuritiga, waxaad u heli doontaa lacag bixintan si toos ah. Haddii aadan xarayn cashuur ama aadan qaadan lacagta sooshal sekuritiga, wxaad kartaa inaad:
Booqato barta internetka IRS.. Waxaad u baahan doontaa lambarka koonto bangi, aqoonsi ay dowladdu soo saartay iyo Sooshal Sekuritiga.
Ka wac Prepare+Prosper, oo ah urur samafal oo reer Minnesota ah, telefoonka 651-287-0187, haddii aad wax dhibaatooyin ah kala kulanto habsocodka ama aad u baahan tahay koonto si aad u hesho lacag dhigashada tooska ah.
Soo hel goob kuu dhow oo bixisa caawimo bilaash ah canshuuraha.
Kaydadka cuntada ayaa u furan dhammaan kuwa u baahan cunto:
Kaydka cuntadu waa meel u ammaan ah qof kasta oo u baahan cunto. Qofna waa inuusan gaajoon, oo ay ka mid yihiin dadkaas qoysaska soohaajirayaasha iyo kuwa aan sharciga lahayn.
Laguma weyddiin doono inaad buuxiso wax waraaqo ah.
Qaar badan oo ka mid ah meelaha keydka cuntada ayaa kuu keeni kara cuntada haddii aadan kaxayn karin gaadiid ama aad ka baqyso inaad kaxayso gaadiid si aad u tagto meesha kaydka cuntada.
Waxay u sameeyeen isbaddelo sidii loo hubin lahaa in adiga iyo shaqaaluhuba badbaado u noqotaan.
Raadi meelaha kayd cuntada kuu dhow adiga oo isticmaalaya soo helaha Food Shelf Finder ama waxaad wacdaa 1-888-711-1151 (Khadka Caawinta Hunger Solutions Helpline). Af-celiyeyaal (tarjumaanno) ayaad heli kartaa.
Haddii aad shaqala'aan tahay ama saacadahaaga aad loo yareeyay, waa inaad codsataa dheefaha caymiska shaqala'aanta.
Waxa laga yaabaa inaad kordhisato dheefahaaga haddii aad horey u isticmaashay dheefaha shaqala'aanta sannadkan.
Waxaa jira barnaamij caymis shaqo oo cusub oo loogu talagalay dadka iskood u shaqaysta, kuwa showyada dhiga iyo qaar ka mid ah shaqaalaha mushqaayadah hooseeya qaata. Haddii aad u malaynayso inay taasi adiga ku khusayso, haddaba codso..
Wixii macluumaad dheeri ah ka eeg barta internetka COVID-19 iyo Dheefaha Shaqala'aanta.
WIC ayaa wali shaqaynaysa.
Fadlan wac hay'adda WIC ee deegaankaaga ama 1-800-657-3942.